UHolly Black, omunye wabavezi abavelele kakhulu benganekwane yombhalo | Izincwadi Zamanje
UJuan Ortiz | | I-Biography, Fantasy, I-Novela
Ukucaphuna kukaHolly Black
UHolly Black ungomunye wababhali baseMelika abadume kakhulu ohlotsheni lwenganekwane yentsha. Uvelele ekucacisweni kochungechunge lwezincwadi ezinhle kakhulu, njenge: IziKronike zaseSpiderwick y Umdeni Womoya (Abahlali basemoyeni). Imisebenzi yakhe ihunyushelwe ezilimini ezingaphezu kwezingama-30 futhi yamvumela ukuba abe sohlwini lwe bestsellers en I-New York Times ezikhathini eziningana.
Umbhali uphinde wakhiqiza imisebenzi ngokubambisana nabanye ababhali abadumile. NgoCassandra Clare wabhala IMagisterium (2014). Ngasohlangothini lwabo, uCecil Castellucci, Justine Larbalestier no-Ellen Kushner baphakathi kwabanye abantu asebenze nabo. Ngaphezu kwalokho, waziwa ngochungechunge lwakhe lwenoveli ecacile: Omakhelwane Abahle, owaphakanyiselwa ama-Eisner Awards ngo-2009.
1 IHolly Black Biography
2.1 Impumelelo enkulu
2.2 Isebenza nabanye ababhali
2.3 Izincwadi zakamuva
3 Izincwadi ezihamba phambili zeHolly Black
3.1 I-Tribute: I-Fairy Tale Yesimanje (2002)
3.2 I-Spiderwick Chronicles: I-Evil Ogre (2004)
3.3 Indlovukazi Yento (2019)
IHolly Black Biography
UHolly Riggenbach, umbhali nomhleli, wazalelwa eNew Jersey ngoNovemba 10, 1971. Wachitha ubuntwana bakhe edolobheni langakubo futhi kusukela esemncane kakhulu wakhombisa ukukuthanda kakhulu ukufunda. Mayelana nabazali bakhe, imininingwane encane iyatholakala. Izifundo zakhe zobungcweti zenziwa e-The College of New Jersey, lapho ngo-1994 athola khona i-BA yesiNgisi.
Okwamanje, uhlala eMassachusetts, eNew England, nomyeni wakhe uTheo Black, owashada naye e1999 futhi ubudlelwano bakhe baholela endodaneni yakhe eyizibulo: uSebastián Black.
Black washicilela incwadi yakhe yokuqala ngo-2002, The Tribute: Isimanje Senganekwane. Lokhu kwabalwa yi-American Library Association phakathi izincwadi ezihamba phambili kubantu abadala. Ngo-2005, wanezela le ndaba nge Iqhawe, umsebenzi athola ngawo i- Umklomelo weNebula 2006. Kamuva wethule okulandelayo: I-ayina (2007), kufakwe ohlwini lwabathengisa kakhulu ku I-New York Times.
Esinye sezikhathi ezibaluleke kakhulu emsebenzini kaHolly Black safika e 2003, nini nomculi uTony DiTerlizzi (umklomelo kaCaldecott) wethule izincwadi zokuqala ochungechungeni oluthengisa kakhulu I-Spiderwick Chronicles: I-Field Guide kanye ne-The Seeing Stone. Lezi zengezwe ngonyaka olandelayo nge: Imfihlo kaLucinda, Isihlahla se-Ironwood Nolaka lukaMulgarath.
Black Wenze nezinye izincwadi ezihlobene nomhlaba we ISpiderwicknjenge: Umhlahlandlela Wensimu ka-Arthur Spiderwick Womhlaba Omnandi Okuzungezile (2005), Incwajana Yokubukwa Okumnandi (2005) futhi Ukunakekelwa nokuphakelwa kwama-Sprites (2006). Ngo-2008, uchungechunge lwaguqulwa ngempumelelo ku-cinema ngaphansi kwegama: IziKronike zaseSpiderwick, umlingisi odlala phambili uFreddie Highmore.
Isebenza nabanye ababhali
I-American ikhiqize ezinye izincwadi ngokuhlangana nezinye izibalo ezibalulekile emkhakheni wezincwadi, kufaka phakathi: I-Geektastic (UCecil Castellucci, 2009), AmaZombi vs. Ama-Unicorn (UJustine Larbalestier, 2010), Uyemukelwa eBordertown (U-Elllen Kushner, 2011) nochungechunge lwezincwadi olubiziwe IMagisterium (2014), ebhalwe enkampanini uCassandra Clare futhi enamakhophi ama-5.
Umsebenzi wakhe wakamuva uhambelana ne-trilogy: The Abantu Bomoya. Lolu chungechunge lwezincwadi luqala ngo- INkosi Enonya (2018), okwakungamasonto ambalwa ohlwini bestsellers en I-New York Times. Uqhubeke unyaka ngemuva kwalokho nge Inkosi embi (2019) —Futhi ungowokuqala ekuthengisweni—, futhi Indlovukazi yakhona (2019), aqeda ngayo i-trilogy.
Izincwadi ezihamba phambili zeHolly Black
The Tribute: Isimanje Senganekwane (2002)
Kuyincwadi yokuqala kaHolly Black, futhi iqala nesaga: Inganekwane yesimanje. Kuyinoveli yezinganekwane ebekwe eNew Jersey, lapho umhlaba wangempela uxubene nomunye wemilingo owakhiwe ama-fairies. Phakathi kwabalingiswa abaphambili kukhona uKaye, intokazi ebuyela ekhaya futhi ilangazelela ukubona lezo zidalwa ezinhle ayedlala nazo esemncane.
UKaye uqhubeka nokuhamba njalo enkampanini weqembu lomculo we-rock elakhiwa ngunina, u-Ellen, nobaba wakhe ongamzali. Ngemuva kokuvela ubusuku obubodwa endaweni yokucima ukoma, u-Ellen uhlaselwa ngesihluku ngumlingani wakhe, ngenxa yalokho, unquma ukubuyela eNew Jersey nendodakazi yakhe. UKaye uwuthanda kakhulu umqondo wokubuyela emuva ayobona umngani wakhe omkhulu uJanet futhi mhlawumbe nabangane bakhe bokucabanga, abathi bangempela.
Lapho nje befika edolobheni, uKaye ubheka yonke indawo lezi zinhlamvu zemilingo, kodwa angaphumeleli. Ngobunye ubusuku uphuma noJanet beyozijabulisa, kodwa kukhona okungahambi kahle futhi unquma ukubuya. Maphakathi nehlathi, UKaye uthola uRoiben elimele kabi, lowo amsizayo futhi avuma ukuphinde ahlangane naye. Ngenxa yalowo mhlangano, uthola umyalezo ovela kulabo bangane abacabangayo, emxwayisa ukuthi angaqheleli eRoiben.
Ukusuka lapho, UKaye ufeza engangikulangazelela kakhulu, hlangana nama-fairies. Bona Bayamxwayisa ukuba angasondeli kuRoiben ngoba ungowaseNkantolo Yomnyama futhi uyisidalwa esiyingozi kakhulu. Ngaphezu kwalokho, Bayamazisa ukuthi kukona ukuthi ama-fairies ahlala mahhala. URoiben, okwamanje, uzozama ukumkhombisa olunye uhlangothi lwalelo zwe angalazi.
The Tribute: Umlando ...
I-Spiderwick Chronicles: I-Ogge Ogre (2004)
I-ogre embi yincwadi yesihlanu ka IziKronike zaseSpiderwick. Njengezinye izindaba ezakha lesi saga, yinoveli yezinganekwane yezingane enemifanekiso kaTony DiTerlizzi. Le ndaba iphetha uchungechunge lokuqala lwemisebenzi edalwe yilaba baculi ababili, ebithengiswa kakhulu.
Uzungu luqala ngokubuyela kukaJarede, uSimon noMallory ekhaya labo., abakuthola kuphihliziwe, y lapho, ngaphezu kwalokho, unina akekho. Masinyane, bafinyelela esiphethweni sokuthi uMulgarath omubi unesibopho, ngakho-ke banquma ukuphuma bayomfuna ukuze bamehlule.
Ngale ndlela, uzoqhubeka nokuzijabulisa lapho, ngaphandle kokuphela kweMulgarath, Kuzofanele bakhulule u-Arthur Spiderwick, ozobasiza ukuthi baphinde bathole umhlaba.
OKUBI OGRO, THE: ...
Indlovukazi yalutho (2019)
Le ncwadi emnyama imele isihloko sokugcina se-trilogy Abantu Bomoya, una inganekwane yamaphupho ezothando Kwenzeka isikhathi eside ngemuva kokuthi uJuni emenyezelwe njengeNdlovukazi yamaFairies futhi waxoshwa yiKing Cardan., eba yindlovukazi yalutho. Isikhathi eside, uJuni kwadingeka alwe nemizwa yakhe ngenxa yokukhashelwa kukaCardan, ngaphezu kokuzijwayeza umhlaba ofayo.
Ukukhishwa kokulungiswa kwefilimu kwale trilogy kulindeleke kungekudala, kusukela kumkhiqizi ngamunye Universal Isithombe uthole amalungelo okubukelwa kule ndaba. Umqondisi uMichael De Luca uzobe enza le filimu, ngakho-ke izoba sesikrinini esikhulu kungekudala.
UJune, odingisiwe ezweni laseFaerie, kumele abuye abhekane noCardan, ngenxa yesicelo esivela kudadewabo oyiwele uTaryn, osengozini. Ukuba lapho, Kuzokhishwa isiqalekiso, okwenza lowo ophikisayo aphikisane nokuthi ngabe kufanele aphule i-hex noma abuyele emhlabeni wangempela. Kodwa-ke, lokhu kukhetha kokugcina kuzolimaza ibhalansi kaFaerie.
Ngakho-ke kwethulwa izimo eziningana lapho uJuni noCardan bazoba ngabalingisi abaphambili. Kancane kancane, Ngemuva kwayo yonke imicimbi ebekwe ngobunono nguMnyama, ulinda ukuphela okugcwele imizwa eminingi.
La reina de nada...
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Biography » Holly omnyama
ULaura Mas. Ukuxoxisana nombhali wencwadi ethi The Teacher of Socrates
Izincwadi ezisuselwa kwimicimbi yangempela